राप्ती नदीमा पानीको स्तर खतराभन्दा माथि – दाङ खबर
नेपालगञ्ज असार २९ । लगातारको वर्षातपछि राप्ती नदीमा पानीको सतह बढेपछि बाँके प्रशासनले नदी आसपासका बासिन्दालाई सजग गराएको छ । राप्ती नदीमा पानीको सतह खतराभन्दा माथि पुगेपछि स्थानीय प्रशासनले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सजग गराएको हो । राप्ती नदीमा पानीको सतह तीब्र गतिमा लगातार बढिरहेको बाढी मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
शनिवार अपरान्ह सवा चार बजेपछि कुसुमस्थित राप्ती नदीमा पानीको सतह ५.६९ मिटर पुगेको बाढी मापन केन्द्रले जनाएको छ । कुसुमस्थित राप्ती नदीमा पानीको सतह ५ मिटर पुगे खतराको मानिन्छ भने ५.४० मिटर पुगे चेतावनी दिने गरिएको छ । चेतावनीको स्तरमा पानीको सतह पुगेमा राप्ती नदी आसपासका झण्डै एक सय गाउँ डुवानमा पर्ने गर्दछन् ।
Prevदेशभर आज पनि भारि वर्षा
Nextगाउँमा टिक्दैनन् युवा ? विदेशबाट फर्किएर फेरि विदेश
कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्नुभएकाे छ ? यी अस्पतालमा हुनेछ स्वास्थ्य परीक्षण